musha / Ultrasonic Welder / 15KHz inogadzira welder / Ultrasonic epurasitiki Welder YePurasitiki Welding Maitiro Mhinduro
Categories: 15KHz inogadzira welder, Ultrasonic Welder, welder Tags: tenga ultrasonic plastiki welder, Handheld ultrasonic welder, sonic epurasitiki Welding, sonic Welding, Ultrasonic epurasitiki welder, ultrasonic yepurasitiki inomhanya, Ultrasonic epurasitiki Welding muchina, Ultrasonic welder, ultrasonic welder yekutengesa, Ultrasonic welder inogadzira, Ultrasonic welder mutengo, Ultrasonic welder mutengesi, Ultrasonic Welding, ultrasonic welding muchina
Ultrasonic epurasitiki welder | Ultrasonic welder | Ultra sonic epurasitiki welding muchina neAtomatiki Frequency Chasing
♦ Zvizere otomatiki frequency kudzingirira, yakakodzera akasiyana siyana saizi welding kufa uye akasiyana dhizaini dhizaini, otomatiki kudzingisa frequency wanda: ± 400HZ
Muenzaniso: 15KHZ ultrasonic, kuumbwa frequency muna 14.4-15.2KHZ inogona otomatiki frequency traceability
Iko kushandiswa kweCPU komputa yekutarisa akasiyana mapurogiramu kunokurumidza uye kuchinjika. Iyo yakavakirwa-mukati yekudzivirira system "system chengetedzo yekutarisa" basa rinozopindura kune anotevera mamiriro: iyo tembiricha yakanyanya kukwirira uye kumanikidza kwakanyanya, izvo zvinotungamira kuwandisa. Kunyanyisa kwazvino kweiyo ultrasonic jenareta, kusunungura kweiyo solder musoro, transducer kana transducer, kutadza kwejenareta wedunhu, nezvimwe.
♦ Kuita otomatiki kunoita kuti iyo inogadzira giraidhi iite otomatiki uye ishandure shanduko mukutenderera kwemusoro frequency. Kana tembiricha yakanyanya kukwirira, pfeka pamusoro pemusoro wemoto kana tsvina pamusoro, shanduko iyi inowanzoitika.
♦ Yakavakirwa-mukati otomatiki inogara iri amplitude system. Iyo ultrasonic amplitude inogona kugadziridzwa kubva ku50% kusvika 100% isina danho kuti ijairane kune akasiyana welding basa.
♦ IGBT, iyo yekumhanyisa mhanyisa inomhanya zvakapetwa ka100 pane iya yechinyakare silica gel simba chubhu.
mhando 1520A 1526A 1532A 1542A
simba 2000W 2600W 3200W 4200W
chinzvimbo 10-20 times / min
Kutyaira fomu Pneumatic
Stroke Length (Horn Journy) 75mm 100mm
Nguva yekuburitsa 0.01-9.99S inogadziriswa
Welding Nzvimbo Φ100 Φ200 Φ300 Φ400
Kudzora maitiro Kudzora manhamba
Kushanda kwemhepo 1–7 Bar
uremu 90KG 90KG 90KG 120KG
miganhu 450 * 750 * 1100mm 760 * 1000 * 1950mm
1. Ultrasonic yepurasitiki Welder, manning tuning, yakapusa kushandisa uye kugadzirisa.
2. Welding nenguva, kunonoka nguva, nguva ye weld uye kubata nguva. Kushanda kumanikidza kunochinja.
4. Yakanyatsojeka uye mhando yepamusoro inotumirwa pneumatic zvikamu
5. Yakakwirira mhando transducer uye booster.
6. Kuzvidzivirira: Kupfuura-Parizvino, Kakawanda kutsauka, Kupfuura-Kupisa
7. Inowanikwa mu4 mafambiro - 15 KHz, 20 KHz, 35 KHz uye 40 KHz.
8.Kurumidza kunyorera shanduko, yakakwira yekunamatira musono simba
9. Inokodzera macadhi akakwira uye yakapfupi kutenderera nguva.
Ultrasonic plastiki Welder \_ Ultrasonic Welding epurasitiki muchina unoshandiswa zvakanyanya mumotokari indasitiri, indasitiri yemagetsi, indasitiri yezvokurapa, midziyo yemumba, yakarukwa nguvo, hofisi zvigadzirwa, yekupakata indasitiri, indasitiri yekutambisa, zvichingodaro.
YeMotokari indasitiri: nhengo dzemapurasitiki, mikova yemotokari, dashboard yemotokari, mwenje, magirazi, vhiri rezuva, mukati memukati, mafirita, zvinhu zvinoratidzira, zvinoratidzira spike, bumper, tambo, purasitiki yefaira yemudhudhudhu, Radiator, brake fluid tank, makapu emafuta, matangi emvura, mafuta tangi, mweya hose, zvese zvinonatswa, iyo tray ndiro, zvichingodaro.
Plastiki Magetsi: akabhadharwa emamita emvura, zvekushandisa zvekutaurirana, zvisina waya, nhare mbozha, nharembozha, bhatiri kesi, charger, vharuvhu yekugadzirisa inodzora lead-acid mabhatiri, 3-inch floppy disk, U disk, SD kadhi, CF kadhi, USB kubatana, Bluetooth zvishandiso, nezvimwewo.
Stationery: dhairekitori, dambarefu, kupeta mabhokisi, PP mhango bhodhi, peni zvishwe, inki makadhibhokisi, toner cartridges, zvichingodaro.
Zvokurapa uye zvezuva nezuva zvigadzirwa: mawachi, midziyo yemukicheni, yemumuromo yemabhodhoro emabhodhoro, madhivha, nharembozha, goridhe rakapfava bhurasho, uye zvinodikanwa zvezuva nezuva, mubato, ngowani dzekuchengetedza, bhodhoro rezvizoro, poto yekofi, michina yekuwachisa, mweya wekubvisa mweya, simbi dzemagetsi, keturu dzemagetsi, vachenesa , vatauri, chifukidziro uye simbi sefa grille uye humwe uinjiniya uye zvichingodaro.
Zvigadzirwa zvehutano: zvigadzirwa zvevana, mamatiresi emhepo, zvipfeko zvekurembera, zvekurimisa gadheni, kitchenware sanitary ware, shawa, shawa musoro, zvichingodaro.
Ultrasonic Welding Zvishandiso: Yakachena PVC, PET kana mapurasitiki ane anopfuura makumi maviri% ePV zvemukati zvakasimbiswa-kupisa, dehwe reganda kupisa-rakasimbiswa, kana jira kupisa-rakasimbiswa, uye zvimwe zvakakosha-chinangwa zvigadzirwa zvinogona kugadziriswa; iyo yekushandisa renji inosanganisira kupisa-kuvhara kwekusimbisa bhutsu neheti, kuchera zvipfeko, matoyi, zviratidzo, mabhegi, Mvura inonaya, zvinyorwa, mabhokisi ekupeta, maCD mabhegi, mabhegi ekupakata, emabhokisi eziso, maarabhamu, maalbamu emifananidzo, makadhi ebhizinesi, notepads, zvigadzirwa zvemagetsi, zvishandiso, zvemitambo nhumbi kupisa chisimbiso, bhatiri blister kurongedza chisimbiso, nezvimwe; inowanzo shandiswa mumapurasitiki, Electronics, zvigadzirwa zvemagetsi, auto zvikamu, kurongedza, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, zvekushandisa zvekurapa, machira asina kurukwa, matoyi, michina yekutaurirana uye mamwe maindasitiri.
Ultrasonic Welding michina | Ultrasonic epurasitiki welder ye thermoplastic uye machira
Ultrasonic mask masker yeKN95 mask nonwoven machira ekubatanidza maitiro